February 2021 – Page 14 – Sanjal Nepal
February 5, 2021 admin 301
February 4, 2021 admin 3016
February 4, 2021 admin 2634
काठमाडौं ।अहिले कोरोनाका कारण पुरै मुलुक लकडाउनमा छ । सबै घरभित्र छन् । सरकारले दैनिक ज्यालादारी गर्ने र विद्यार्थीलाई भाडामा छुट दिन घरधनीलाई आग्रह गरेको छ । तर राजधानीको बसुन्धरामा भाडामा बसेकी गुल्मीकी एक युवतीलाई
February 4, 2021 admin 581
February 4, 2021 admin 821
February 2, 2021 admin 2259
February 1, 2021 admin 4285
काठमाडौँ– कुनै पनि महिला पुरुष एक अर्काप्रति आकर्षित हुनु सामान्य मानिन्छ ।कुनै पनि पुरुषहरुले पहिलो पटक महिलालाई भेट्दा के कुरामा ध्यान दिन्छन् भन्ने हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छौं । पहिलोः पुरुषहरुले युवतीको ओठमा ध्यान दिने
February 1, 2021 admin 6278
February 1, 2021 admin 8746
बढी आनन्द अनुभूति हुन्छ भन्नेबारे सोधिएको थियो । जसमा उनिहरूको उत्तर थियो- महिनावा’री पूरा भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म । यो अवधिमा महिलालाई सहवा’समा बढी आनन्द आउँछ ।जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्बर्गनका अनुसन्धाताहरू एक हजार युवा र
February 1, 2021 admin 8637
एजेन्सी- आकर्षक को हुन् ? यसमा सबैको मत मिल्छ भन्ने छैन । भूगोल र समुदाय अनुसार सुन्दरताको मापन पनि भिन्न भिन्नै हुनसक्छ । कतै कालो छाला मन पराइन्छ भने, कतै गोरो । कतै पातलो ओंठलाई
LEX 18 agenda conversation: Job club (402749)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (377419)
Hello world! (313186)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (288000)
Technology Training Company Coding Dojo to Open Boise Campus at Trailhead (104834)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (104571)
Brody king On Why He Wouldn’t depart His full Time Job To signal With WWE (99153)